काठमाडौं । शुद्धता, सद्भाव र आस्थाको पर्व छठ आज श्रद्धा एवं हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ । सूर्य र उनको देवी रूप उषालाई छठी मैयाँको रूपमा षष्ठी तिथिमा मुख्य पूजा गरिने हुनाले यो पर्वको नाम छठ पर्न गएको ह...
नेपाली आरोही निर्मल पुर्जाले राखे १४ वटा हिमाल चढेर नयाँ विश्व कीर्तिमान
काठमाडौं । नेपाली आरोही निर्मल पुर्जाले ७ महिनाको अवधीमा सात महिनामा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमाल चढेर नयाँ कीर्तिमान राखेका छन्। ३६ वर्षीया पुर्जाले मङ्गलवार बिहान चीनको शीशापाङ्मा हिमालक...
यमपञ्चको पाँचौं दिन आज भाइटिका, शुभ साइत ११.५५ बजे
काठमाडौं । तिहारको रौनक उत्कर्षमा छ । इन्द्रेणीको सातै रङ्गको प्रतिक टिका, कहिल्यै न ओइलाउने सुपारी फुलका मालाहरु, अमिलो रसिलो भोगटे तथा बिमिरो लगायतका फलहरु, झिलीमिलि बत्तिहरु अनि झिल्केमिल्के कागज, ...
तिहारको चौथो दिन आज: गाई र गोरूको पूजा गरि मनाईदै
काठमाडौं । यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई, गोरु र कृषकको पूजाआजा गरी मनाइँदैछ । गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो । गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जत्तिकै पौष्टिक...
आज काग तिहार, यस्ता छन् कागसँग सम्बन्धित पौराणिक प्रसङ्गहरु
काठमाडौं । कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिनमा मनाइने काग तिहार पर्व आज(शनिबार) यमराजको दूतका रुपमा कागको पुजा गरेर मनाइँदैछ । कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीकै दिन सुरु हुने यमपञ्चक भने यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण...
झिलीमिलीको चाड तिहार आजबाट शुरु, कागपूजा भोलि
काठमाडौं । झिलीमिलीको चाड पनि भनिने तिहारका अवसरमा एक हप्ताअघिदेखि नै राजधानीलगायत प्रमुख शहरमा बत्ती बाल्न शुरु भइसकेको छ । वैदिक सनातन धर्मालम्बीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आज(शुक्रबार) देखि शुरु हु...
समस्या पछि समस्यामा पर्दै आइरहेका पूर्व सभामुख महरा र काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नर्भिक अस्पतालमा दिल खोलेर कुरा गरेको समाचार मिडियाको सम्पत्ति बनिसकेको छ । दुई कृष्णको ३० वर्षे लामो राजनीतिक सम...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधहरुले खाँदै आएको तलवभत्ता रोक्ने फैसला गरेको छ।अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमश...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरी एक पटक आन्दोलन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन । मुलुकमा समाजवाद स्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने ईच्छा रहेको उद्घोष गरेका ...
काठमाडौं । आज दशैंको छैठौं दिन । पहिलो दिन जस्तै दियो, कलश र गणेशको पूजा गरी ‘कात्यायनी’ स्वरूपा दुर्गा भवानीको विशेष पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यस दिन पनि घटस्थापनाका दिन राखिएका जमर...
काठमाडौं । हिन्दूहरुको महान पर्व बडादशैको चौथो दिन आज(बुधबार) शक्तिपीठ, देवीमन्दिर तथा घरघरका पूजाकोठाहरुमा देवीभवानी कुष्माण्डा माताको पूजा आराधना गरिंदै छ । कुष्माण्डा मातालाई शुभकर्म थालनी वा सृष्...
काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक इतिहास नियाल्ने हो भने सात दशकमा सातवटा संविधान बनेका छन । नेपालमा पहिलो पटक १९९७ अर्थात वि.स. २००४ सालमा जुद्ध समशेरले जारी गरेको सनदलाई पहिलो संविधान मान्न सकिन्छ । तत्...
काठमाण्डौ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको महान चाड दशैँलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक यातायातको अग्रीम टिकट बुकिङ आज (आइतबार) देखि खुलेकाे छ । चाडपर्व मनाउनका निमित्त काठमाडाैंबाट घर फर्किने सर्वसाधारणलाई मध्यनज...
काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको आज चार वर्ष पुरा भएको छ। आज सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएको छ भने संविधान दिवस भव्य रुपमा मनाउने भएको छ । सरकारले संविधान जारी भएकै दिनलाई राष्ट...
काठमाडौं । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कानूनविदहरुले जोड दिएका छन । संविधान दिवसको अवसरमा संविधानको सकारात्मक ...
एजेन्सी । राती सुत्नु अघि मोबाइल चार्जमा लगाएर सुत्नुहुन्छ ? - पक्कै सुत्नुहुन्छ । दिनभरको कार्यव्यस्तता र धुपदौडका लागि मोबाइल अनिवार्य नै भइसकेको छ । दिनभर काम गरेर आएपछि सुत्नुअघिसम्म केहि समय मोबा...
काठमाडौं । विश्वका आदि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा पूजा असोज १ गते बुधबार मनाइदैछ । विश्वकर्मा पूजाको दिन आफ्ना सवारी साधन, कलकारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण, औजार आदिको पूजाआजा गरिन्छ । यो पूजा स...
सोर्‍ह श्राद्ध आज(शनिबार)बाट शुरु भएको छ । आफ्ना पितृहरुको सम्झनामा जल र अन्न दिएर गरिने यो श्राद्ध शनिबारबाट शुरु भएको हो । चन्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष वा सामान्य बोलीचालीको भाषामा...
काठमाडौं । देशमा यतिखेर डेंगु नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ । देशका ५६ जिल्लामा डेंगुको संक्रमण फैलिएको छ । वैशाख अन्तिम साताबाट सुनसरीको धरानदेखि फैलिएको डेंगुको संक्रमण अहिले सम्म ५६ जिल्लामा फैलिसके...